Jehovha Angabvumira Kuti muKristu Ashaye Zvokudya Here? | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mongolian Moore Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Mashoko aDhavhidhi ari pana Pisarema 37:25 uye aJesu ari pana Mateu 6:33 anoreva here kuti Jehovha haazomboregi muKristu achishaya zvokudya?
Dhavhidhi akanyora kuti haana “kumboona munhu akarurama achisiyiwa zvachose, kana vana vake vachitsvaka zvokudya.” Mashoko aya akaataura achifunga zvakaitika muupenyu hwake. Ainyatsoziva kuti Mwari haambosiyi vanhu vake. (Pis. 37:25) Asi mashoko aDhavhidhi haarevi kuti kana uri mushumiri waMwari haumboshayi zvokurarama nazvo.
Pane dzimwe nguva Dhavhidhi aimboomerwawo neupenyu. Izvozvo zvakamboitika paaitiza Sauro. Ainge asisina zvokudya saka akakumbira chingwa chokuti adye pamwe nevaaiva navo. (1 Sam. 21:1-6) Saka panguva iyoyo, Dhavhidhi ‘aitsvaka zvokudya.’ Asi aiziva kuti Jehovha ainge asina kumusiya. Chokwadi ndechokuti hapana patinoverenga panotaura kuti Dhavhidhi akapemha zvokudya.
Pana Mateu 6:33, Jesu akavimbisa kuti Mwari anopa vashumiri vake zvokurarama nazvo kana vakaisa zvinhu zvoUmambo pokutanga. Akati, “Saka, rambai muchitanga kutsvaka umambo nokururama kwake, uye izvi zvimwe zvinhu zvose [kusanganisira zvokudya, zvokunwa uye zvokupfeka] zvichawedzerwa kwamuri.” Asi akataurawo kuti “hama” dzake dzaigona kushayiwa zvokudya nemhaka yokutambudzwa. (Mat. 25:35, 37, 40) Izvi zvakaitika kumuapostora Pauro. Dzimwe nguva aishaya chokudya uye chokunwa.—2 VaK. 11:27.
Jehovha akataura kuti tichatambudzwa nenzira dzakasiyana-siyana. Angabvumira kuti tishayiwe zvimwe zvinhu zvatinoda kuti tiratidze kuti zvinotaurwa naDhiyabhorosi ndezvokunyepa. (Job. 2:3-5) Somuenzaniso, dzimwe hama dzedu, sedziya dzakaiswa mumisasa yevasungwa yeNazi, dzakatambudzwa chaizvo. Dzimwe nguva vavengi vaiedza kuita kuti vanhu vaMwari vatyore mutemo wake nokuvanyima zvokudya. Jehovha haana kusiya vashumiri vake vakaramba vakatendeka kwaari. Akabvumira kuti vasangane nemuedzo uyu sokungobvumira kwaanoita vaKristu vose kusangana nemiedzo yakasiyana-siyana. Zvisinei, hapana mubvunzo kuti Jehovha anotsigira vose vanotambura nokuda kwezita rake. (1 VaK. 10:13) Izvi zvinotiyeuchidza mashoko ari pana VaFiripi 1:29 okuti: “Imi makapiwa ropafadzo nokuda kwaKristu, kwete kuti mutende maari chete, asiwo kuti mutambure nokuda kwake.”
Jehovha anovimbisa kuti achava nevashumiri vake. Somuenzaniso, pana Isaya 54:17 panoti: “Chero chombo chipi zvacho chichagadzirirwa kukurwisa hachizobudiriri.” Vimbiso iyi nedzimwe dzakawanda dzinoratidza kuti Jehovha anodzivirira vashumiri vake seboka. Asi muKristu mumwe nomumwe anogona kusangana nemiedzo, zvimwe kutosvika pakuurayiwa.
Mibvunzo Inobva Kuvaverengi—September 2014